Ihe Google Google Anaghi-Amaghi na Uzo Bara Uru Gam akporosis
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Ngwa gam akporo
Anyị niile maara otu o si buru ibu Google na nke ọtụtụ na ọrụ dịgasị iche iche nke ahụ na-enye. Ọtụtụ n’ime ọrụ ndị a abụrụla ihe dị mkpa taa. Nke ukwuu nke mere na n'ọnọdụ ụfọdụ ọ ga-esiri anyị ike iji echiche nke ndụ na-enweghị Google mee ihe, ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ dị ka Huawei siri ọnwụ (ọ bụghị maka obi ụtọ) iji gosi na ọ ga-ekwe omume.
Ka ukwuu ma ọ bụ n'obere anyị niile na-eji ngwa Google ọtụtụ ugboro n'ụbọchị. Na enwere ọtụtụ ngwaọrụ nke nnukwu "G" na-enye anyị na ọtụtụ na-agbanahụ ihe ọmụma anyị. Maka ịkọwapụtakwu ma ọ bụ maka iji ya eme ihe. Taa ka anyị wetara gị 4 ngwa ọdịnala ị nwere ike ọ gaghị ama mana nke ahụ nwere ike ịba uru.
1 Obere ngwa Google bara ezigbo uru
2 Desktọọpụ Ime Ime
4 Google faịlụ
5 Chọta ngwaọrụ m
Obere ngwa Google bara ezigbo uru
Maka gị iji mezue elu nke ngwa gị kachasị baa uru, taa anyị ewetara gị ụfọdụ nwere ngwa Google nke ị nwere ike ịmaghị. Echiche bụ na ụbọchị anyị taa dị mfe yana ekwentị anyị na-enyere anyị aka ime ya. May nwere ike ịma ha niile ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ụfọdụ n’ime ha, ma ọ bụrụ n’ezie na ị maghị, obi ga-adị gị ụtọ ịnụ banyere ha.
Ngwa maka nweta arụmọrụ ka mma ma ọ bụ mee ọrụ nke ahụ pụrụ ịdị na-agwụ ike n’enweghị ngwá ọrụ ndị dị mkpa. Na ngwa maka melite nche nke ngwaọrụ anyị na-anabata gị mgbe niile. N'ebe a, anyị hapụrụ gị nhọrọ nke 4 nke ga-enye gị aka.
Desktọọpụ Ime Ime
E nwere nnukwu Google Play Store a na-apụghị ịgụta ọnụ ngwa ga-eji jikwaa desktọpụ PC gị remotely. Ma ọ bụ site na ama gị site na ebe ọ bụla, ma ọ bụ site na kọmputa ọzọ. Google kwuputara nke ya, na anyị ga-ekwu nke ahụ, na ezi njikọ, onye ọrụ ahụmahụ bụ ezigbo onye na obi ụtọ.
Ihe mbụ anyị kwesịrị ime bụ wụnye ndọtị Google Chrome na kọmputa anyị nke mere na njikọ a "zuru oke". Arụ ọrụ nke a na ngwa ọ ga-adabere nke ukwuu n'ụdị ọrụ anyị chọrọ ịrụ site na ekwentị. N’iburu n’uche adịghị ike nke smartphone na-enye iji rụọ ọrụ kọmputa na usoro nke ihuenyo mmetụ arụmọrụ.
Ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ ngwa lee faịlụ kpọmkwem. Banye na Netflix n'ihi ya, i nwere ike iji ya na-enweghị nsogbu na gị ama. Ma ọ bụ hụ otú echichi nke ihe omume na-aga dị na nbudata ị gaghị enwe nsogbu. N’okwu ndị a niile, ngwa a ga-ezu oke. Ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iji ụfọdụ mmemme ma ọ bụ rụọ ụdị ọrụ ọzọ, dị ka anyị na-ekwu, anyị ga-ahụ ụfọdụ adịghị ike.
Ọ bụrụ na ị tụkwasịrị obi na ngwanrọ Google karịa ihe ọ bụla ọzọ na-enyo enyo na ị nwere ike ịchọta na Storelọ Ahịa Play ma ọ bụ ebe ọzọ, "Ngwaọrụ Desktọpụ Google" bụ nhọrọ magburu onwe ya. Ọ na-ejikọta n'ụzọ dị ebube na akaụntụ gam akporo anyị na nke kachasị, anyị na-ekwe nkwa ịghara ịchọta mgbasa ozi na oge obula.
Iwepụ Desktọpụ Chrome
Ebe anyị na-ahụ a ngwaọrụ n'ezie na-akpali n'ihi na "Gbanwee" foto ochie n'ime usoro dijitalụ na anyị niile nwere n'ụlọ. Icheta nke oge mgbe enweghi usoro dijitalụ nakwa na ha kwesịrị ịtachi obi n'ihi mkpa ọ dị ha n'ọkwa onye ọ bụla.
N'otu ụzọ ahụ dịka na App gara aga, na eziokwu na ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla, anyị ga-ahụ ụdị nhọrọ dịgasị iche iche dị na Storelọ Ahịa Play. Nhọrọ nke Google nwere aha ọma na ụlọ ahịa na kwere nkwa iji nye nsonaazụ ọma dị mma.
Ọ bụrụ na ị gbalịrị i scanomi a foto Antigua sure na i banyela otutu nsogbu. Hazie ndakọrịta, ndo na rarities na ezigbo agba. Nwere ike na-ewere foto site na ekwentị na-eme ka usoro a dị mfe. Ọ bụrụ na mgbakwunye na digitization a rụrụ n'ụzọ dị elu karịa iji nhazi ihe oyiyi, ka mma.
Otu n'ime isi nsogbu mgbe anyị na-ese foto nke akwụkwọ na / ma ọ bụ foto ọ na-abụkarị akuku eji. Ihe na - emecha na - emetụta ọdachi. Ọ bụ mmadụ ole na ole nwere ike itinye ekwentị na dọkụmentị nke ọma, ghara ikwu banyere onyinyo na anyị nwere ike ime na smartphone n'onwe ya n'etiti onyonyo na ọkụ.
Google PhotoScan na-enye anyị a ọkachamara rụpụtara na sekọnd. Anyị ga-enweta a akpaka cropping dabere na akpaka onu nchọpụta. Nnennen nyocha na akụkụ anọ na udi na nlezianya anya. Ntughari di nma nke foto ya mere na ha ziri ezi. Ihe karịrị ihe mere ị ga - eji jiri App a wee digitize foto gị ochie na ụzọ kachasị mma.
Foto Google mere site na PhotoScan
Anyị na-akwado gị ngwa na ọrụ Google. Na nke a anyị na-ekwu maka ya ihe ga-eme ka ngwaọrụ gị gbakee oghere. A nhicha nke cache, hichapụ foto, oyiri faịlụ, memes na ngwa na ị naghịzi eji dị mma maka ngwaọrụ anyị. Iji Faịlụ ị nwere ike ịtụkwasị obi na ncheta ahụ agbaghara gị na ngwaọrụ gị ma ị ga - enwetaghachi mmiri nke ọrụ ya.
Google faịlụ enyere gị aka ijikwa nchekwa ekwentị gị. Ego ole ncheta I nwere na smartphone na kaadị site na ebe nchekwa. Ọ na-enyere anyị aka ọrụ nke na-esiri anyị ike mgbe ụfọdụ. nyefee faịlụ site na Ngwaọrụ na kaadị ebe nchekwa. Nweta ohere efu ma rụọ nhicha faịlụ maka arụmọrụ ka ukwuu.
Iji Google App faịlụ anyị nwere ike ịkekọrịta faịlụ niile na ekwentị anyị na-enweghị mkpa njikọ. Na ndị ọrụ ndị ọzọ nwere otu ngwa anyị nwere ike zipu ma nata akwukwo ngwa ngwa na nchekwa. Faịlụ na-enye anyị ohere nke izo ya ezo WPA2. Site na Bluetooth anyị nwere ike ịnyefe faịlụ ma ọ bụ ọbụlagodi ngwa ngwa ngwa na enweghị nsogbu.
Dịka anyị pụrụ ịhụ, anyị nwere faịlụ zuru ezu nke na-enye anyị dị iche iche ohere Otu n'ime ọrụ atọ na-apụta. Freehapụ ohere maka ịrụ ọrụ ka mma, chọta faịlụ ngwa ngwa ekele maka nzacha ya, na kesaa ọdịnaya gị niile n’enweghị nsogbu enweghị mkpa ijikọ.
Google sitere na faịlụ
Chọta ngwaọrụ m
Nke a bụ ngwa dị ezigbo mkpa ọ dịkwa ịtụnanya na ojiji ya na nbudata ya enwetabeghị ọnụ ọgụgụ ka mma site na mmalite. Na apụl, ngwa ịchọta igwe furu efu abiala ọkọlọtọ. NA enwetala nnukwu mmata mgbe niile maka inye aka chọta igwe furu efu ma ọ bụ nke ezuru ezu.
Maka ọrụ ya ziri ezi, Ihe mbụ anyị kwesịrị ime mgbe echichi ya bụ iji rụọ ọrụ ebe ahụ ma nabata ikikere ahụ. Ma n'ụzọ ezi uche dị na ya, ka anyị wee nwee ike ịchọta ngwaọrụ furu efu ọ dị mkpa na ọ na-ejikọ na netwọk.
Chọta ngwaọrụ Google m na-enyere anyị aka ịchọta ama anyị, mbadamba ma ọ bụ elekere nwere njikọ na akaụntụ Google anyị. Anyị nwere ike ịga ebe ebe ngwaọrụ furu efu dị na Google Maps. Ọbụna anyị nwere ike iji maapụ ime ụlọ dị na ọdụ ụgbọelu, nnukwu ụlọ ma ọ bụ ebe a na-azụ ahịa.
Iji chọta ya na mpaghara nke enweghị ọhụụ, ma ọ bụ ọbụna n'ụlọ mgbe ị na-enweghị ike ịchọta ya, anyị nwere ike ime ka ngwaọrụ emit a ụda. A) Ee, ọ bụrụ na anyị nọ nso, anyị nwere ike ịgbake ya ngwa ngwa. You nwere ike ịlele ọkwa batrị na ọbụna ọnọdụ njikọ.
Ọ bụrụ na anyị echee na data anyị nwere ike ịdị n'ihe egwu anyị nwekwara nhọrọ iji kpochapụ ngwaọrụ ahụ kpamkpam. N'otu ụzọ ahụ anyị nwere ike igbochi ya nke mere na enweghi ike iji ya. Ọbụna nwere ozi omenala gosipụtara na ihuenyo nke anyi nwere ike gosi nkọwa kọntaktị.
Google Chọta Ngwaọrụ m
Anọ ngwa naghachi-ehichapụ faịlụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ihe Nlere Google Apps abuo amaghi
Samsung Galaxy A Quantum Kwuru na Quantum encryption Technology